Xukuumada Soomaaliya oo cadeysay mawqifkeeda shirka magaalada Garoowe, kuna dhawaaqday. – Xogsoor News Network
Maxkamada sare ee dalka Kenya oo diiday in Kenya ka laabato dhegaysiga dacwada.
Kooxda Ahlu-Quraafa oo sheegtay in dul qaadkii kadhamaaday.
Wafdi Sare Soo Gaaray Muqdisho Iyo Soo Dhaweyn Loo Sameeyay
Dhageyso: Dowlada Somaliya oo Loogu Baaqay in Ciqaabta Laga Qaado.
Dalalka Turkiga iyo Ruushka oo kala saxiixday heshiis Muhiim u ah labada dal.
Wasiirka arrimaha dibada ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo matalaya wafdiga dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, ayaa si adag uga hadlay arrimaha siyaasadda ee dalka, waxaana uu soo qaatay khilaafka u dhaxeeya Xukuumadda iyo Maamulka Puntland.
Wasiirka ayaa sheegay in waxyaabaha u dhaxeeya labada dhinacba ay yihiin kuwa xal fudud laga gaari doono, isagoo sheegay in ay Puntland qeyb ka leedahay arrimaha siyaasiga ah ee waqtigan taagan, wuxuuna bogaadiyey shirka iyo waxyaabaha ay qabatay Puntland.
Madaxda Puntand, waxaan ka rajeynaynaa in ay caqabadaha ay sheegeen ee DFS ka tirsanayaan, in ay ku sheegtaan kuna gudbiyaan in lagu sheego siwalaalnimadii Iyo Wadajirkii Ummadda Soomaaliyeed waxyeeleyn, waxaa la yiri raadka ugu xun e dagaalada Sokeeye ka dhasha waxaa kamid ah Dagaalada Sokeeye Kalsooni darro iyo Is aaminaad la’aan, maadaama aan colaado kasoo baxnay waxaan u baahnahay in aan dib u soo celino” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibada.
XAAF oo la heshiiyey’ hoggaanka Cusub ee Maamulka Galmudug.
Golaha Aqalka sare BFS oo maanta Cod gelinaya Sharciga Doorashooyinka oo dood ka taagan.